5 Reasons to invest in an active lifestyle community in your senior years
By Brenda Hobin
1. Staying healthy
An active lifestyle community can work wonders for your overall wellbeing. Being active at later years will keep illnesses associated with old age at bay. For instance, hypertension, dementia and osteoporosis which could be managed with mental and physical activities. Investing inahome at Pun Hlaing will give you access to the gym, swimming, golf and tennis lessons; or dance, yoga and meditation classes at the country club.
2. Friendships community
Through the organised activities at the country club and golf club, you will meet like-minded neighbours. You will have leisure time for playing cards and walk around the estate, creating long lasting memories with friends you’ve made at the lifestyle estate.
3. Countless amenities and facilities
When you adult kids and grandkids visit you, they can share your active lifestyles at the country club and golf club. They can also join in the kids’ activities organised for the rest of the young residents on weekends.
4. Estate management
The monthly management fees cover services like garbage collection andafull team of community lifestyle managers and curators. Living inalifestyle estate is like living in your vacation home every day.
5. The best luxury home features
The homes could be customised to your tastes, the flooring, the wall colours and the cabinets could be all customised to ensure you get to liveagood and active life.
About Pun Hlaing Lifestyle Community
The 652 acre golf estate is located by the Hlaing and Pan Hlaing rivers, and isabeautifully landscaped oasis of luxury estate villas and serviced apartments, golf course, country club with outdoor pool and tennis courts, culinary experiences, hotel, an international school,ahospital andawellness day spa. Pun Hlaing golf estate isabreath of fresh air away from the city so you can fully relax and enjoy life in Myanmar.
Pun Hlaing golf estate is developed by awards winning real estate developer Yoma Land.
If you'd like to know more about our new projects and homes, please contact us foraprivate discussion.
တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံရှိတဲ့ဝန်းကျင်ဟာ မိမိကိုယ်စိတ်နှလုံးကျန်းမာခြင်းကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ပုံမှန်အားကစားပြုလုပ်ခြင်းဟာ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား တစ်ခု ရောက်သည့်တိုင်အောင် ကျန်းမာနုပျို နေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ တို့မှာ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရုံနဲ့ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာတွင် နေထိုင်သူများမှာ အားကစားခန်းမ၊ ရေကူးကန်၊ ဂေါက်ရိုက်နည်း၊ တင်းနစ်ရိုက်နည်း တို့အပြင် Country Club တွင် အကသင်တန်း၊ ယောဂသင်တန်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
Country Club နှင့် ဂေါက်ကွင်းမှာ အိမ်ရာတွင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် အိမ်နီချင်းများနဲ့ရင်းနှီးမှု ပိုရစေရန် ပွဲတွေစီစဉ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောခြင်း၊ အိမ်ရာတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းအတူတူ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပိုမိုနွေးထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ သာယာသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
ရုံးပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ အလည်လာရင်လည်း country club နှင့် ဂေါက်ကွင်းမှာ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
လစဉ် အထွေထွေအိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်တွင် အမှိုက်များကို စနစ်တကျပစ်ပေးခြင်းမှစပြီး လူနေမှုပုံစံ တစ်ခုလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ နေထိုင်ခြင်းဟာ အပန်းဖြေခရီးထွက်သလိုခံစားမှုမျိုးကို နေ့ရက်တိုင်းမှာ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အကောင်းဆုံးသော အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ
မိမိနေထိုင်မယ့်အိမ်ကိုလည်း ကြမ်းခင်း၊ နံရံအရောင်၊ ဗီဒိုတို့ကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်သော လူနေမှုပုံစံရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဟာ လှိုင်မြစ်နဲ့ပန်းလှိုင်မြစ်ကြားမှာ တည်ရှိပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းသော အိမ်များ၊ service aparments များဖြင့် အိုအေစစ်သဖွယ် တည်ရှိပါတယ်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ တင်းနစ်ကွင်း တို့ပါဝင်သော country club၊ ဟိုတယ်၊ နိုင်ငံတကာကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ spa တို့ပါဝင်ပြီး မွန်းကျပ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ အဝေးမှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာအနားယူအပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဟာဆိုရင် အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာဆုတံဆိပ်များစွာ ရရှိထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေတည်ထောင် သူ ဖြစ်ပါတယ်။
5 Podcasts foraHealthier Mind and Body
What luxury home seekers are looking for in 2021